Jos Brech: "ikpe ikpe ikpe" naanị mgbe okpomọkụ 2019: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY	by Martin Vrijland	na 12 December 2018	• 10 Comments
Site na livestream tweets onye na-ede akụkọ telivishọn bụ Saskia Belleman, ọ na-egosi na Nicky Verstappen (nsogbu) okwu gbasara onwe ya abụghị ihe ọ bụla karịa nkuzi. Ụfọdụ tweets na-agbaso nke ga-egosi na Jos Brech kwetara na ya nwere ụmụ okoro foto na PC ya, kama na ha na-ekwu na ha nwere nje. Jos Brech na-ekwu na ọ na-amalite ikwu okwu mgbe oge ruru, na oge a ezuola mgbe ọ malitere ịghọta ihe na-eme. Ndi anyi na-agba ndi omekorita ndi n'eme ka ya na onye oka iwu ya no?
A ka nwere a obere oge agbatị site kwusịrị na ikpe na-arụ ọrụ na a nlereanya 3D na DNA metụtara hụrụ na underpants nke Nicky Verstappen. Jos Brech ga-agakwa ebe obibi Pieter Baan maka nchọpụta uche na nke ahụ bụ otú e si agbatị ikpe ahụ ma gbasaa ma ikpe ahụ site na mgbasa ozi bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na nke a. Ngwọta Nsogbu, Ngwọta ikpe iji kwalite ịnakwere nchekwa data DNA mba.
Ihe ebube ndị a abụghị nke ụwa. Ọ bụ nyocha ngwa ngwa, n'ezie, ọ bụ ọrụ na - agaghị ekwe omume, ma na mberede ọ nọ n'ebe ahụ akwụkwọ ochie nke Jos Brech, nke ga-ekwu na ya gaara eji ụmụ nwoke na-emeghị ihe ọ bụla mee ihe n'ụzọ mmekọahụ. A na-atụle ikpe ahụ n'ọnọdụ ahụ, ma nke ahụ adịghị mkpa. Peter R. de Vries enwebeghị ike ịhazi oge a nile na kọntaktị ya nile n'ime ndị uweojii na achọtaghachiri nchekwa ahụ, ma na mberede, ọ dị ebe ahụ! Ukwu! Ha anaghị eme ndị uwe ojii na ndị ọkàikpe ikpe ziri ezi.
A chọtakwara akwụkwọ akụkọ ọzọ! Nke ahụ bụkwa nnọọ nnyocha dị ukwuu! Ka anyị ghara ịmalite ozugbo banyere Photoshop na usoro ndị ọzọ. Na-agbasa ozi! A naghị akpọ aha Jos Brech na isiokwu ahụ. Ọ bụghị ihe doro anya na oge Jos Brech ga-abụ aha a họọrọ maka ndị na-enwe obi ụtọ bụ ndị ga-enyere aka n'ịkpụcha ọrụ a (ọrụ uche)? Akụkọ ahụ na-amalite n'akụkụ niile nakwa n'ihi na ikpe na 12 Disemba na-abịa, ọ bụ oge maka mmalite na nkwado nke ududo.
Na ebe nchekwa nke ndị uweojii ebe 2014 bụ akụkụ nke a usoro nlekota oru di iche iche anyị anaghị akpọ ya mma. Na akwụkwọ ndị a nile ga - ejiri 1 chọọ ogologo oge, anyị ekwughị:
Na Nkọwa Ozi nke 2014-2017 Ministry, a họpụtara CDD + ka ọ bụrụ ebe a na-edebe ihe maka nchekwa na mgbanwe nke akwụkwọ na ikpe ndị omempụ na nke ndị mba ọzọ.
Ugbu a, ọ nwere ike ịlụ ụka na nchịkọta akụkọ nke akụkọ ihe mere eme bụ hel nke ọrụ, kamakwa na oge ochie nke nchekwa ihe ị nwere ndekọ na data site na ụbọchị na nchịkọta ndị ọzọ na-enweghị atụ. Naanị na-eche na a na-ebibi faịlụ, ọ ga-adịrị m ka m wepụrụ ya ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ndị mgbasa ozi niile na-eleta Pita R. de Vries. Mee ka pusi na-ekwu na ị ga-eme 33 afọ ịchọta faịlụ dị otú a! Ọ dị mma, afọ iri abụọ, n'ihi na ikpe ahụ bụ Nicky Verstappen dị afọ iri abụọ. Ọ ka dị ịrịba ama.
Nke a ka dị iche na eziokwu ahụ bụ na okwu gbasara 1985 na-enweghị ike inye ihe ọ bụla na-egosi na nke a, ma ọ dị ka ọ na-enyere aka mee ka usoro 'ikpe site na mgbasa ozi' mezuo.
Ihe ka ukwuu n'ime igbu ọchụ igbu ọchụ nke na-adị ogologo oge nke natara nnukwu ntị na mgbasaozi na-edozi ugbu a na okwu nrọ DNA. Ọfọn, ha na-edozi site ikpe site na mgbasa ozi site n'aka Peter R. de Vries wee mee ka mgbasa ozi na-aga n'ụlọ ikpe nke na-ewere ikpe nke ọha na eze, n'enweghị ezigbo nchebe iwu.
Ọzọkwa, ikpe na-abanyewo Saskia Belleman tweet circuses, ebe ọ na-adịghị onye ọ bụla na-ele anya dị egwu karị. N'ọnọdụ Nicky Verstappen bụ maka ọtụtụ afọ amaghi ma e nwere igbu ọchụ, igbu ọchụ, ma ọ bụ mmegbu, ma na mberede, enwere ike inwe mmezu tupu oge ikpebi oge. Ebibiri iwu iwu ọ bụla na akụkọ a, ma nke ahụ enweghị ihe ọ bụla, n'ihi na Peter R. de Vries na-enwe mmetụta nke ndị mmadụ na nne Nicky na-ebe ákwá. Nke ahụ na-arụ ọrụ ebube. Enweghị ihe ọzọ gbasara mgbagha. Mmetụta bụ naanị ụkpụrụ nduzi.
Ihe dị njọ na nke a bụ na DNA sitere na ndị si na nke anọ na nke ise wepụtara iji chọta Jos Brech. Ọ bụrụ na nke a mere ka otu egwuregwu da DNA chọtara n'uwe nke Nicky Verstappen, ndị a hà ga-eche na onwe ha? Na gịnị mere Jos Brech ji ahọrọ ime onwe ya ka ọ ghara ịdaba n'okwu ikpe ebe e gburu ọchụ, ma ọ bụ igbu ọchụ, ma ọ bụ mmegbu? Ọ dịghị, n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla. Ma, obi dị ụtọ, onye ụzụ OM bụ Peter R. de Vries nọ na-ebu ụda maka nkwụsị ikpeazụ: DNA nke Jos Brech nọ na uwe mberede nke Nicky Verstappen. Ọzọ ọ bụ ihe niile gbasara ịfefe nkwenye. Ọ bụrụ na eziokwu adịghị, ị nwere ike ịkọ akụkọ ọhụrụ mgbe afọ 20 gasịrị. Ọ bụrụ na ọha na eze nọgidere bụrụ ihe dị oké egwu, ị na-akpọ nanị maka foto ụmụaka na PC nke (onye a mara ikpe).
M kwuru usoro a tupu 'Ime onye ogbu mmadu'na' Peter R. de Vries ikpe site na mgbasa ozi '. Ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ekwu na ọ dịghị mgbe ọ bụla akaebe nke igbu ọchụ ma ọ bụ mmegbu, nanị ị na - ekwu na ahụ Nicky dị oke ncha iji nweta ezi ihe àmà na autopsy. Na nke a bụ ihe na-adabere na nsonaazụ autopsy na ọnwụ ikpe ndị ọzọ, ọ dịghị ihe ọzọ. Ọ bụ banyere igwu mmetụta gị na mmemme ihe oyiyi ahụ achọrọ.
O yiri ka a na-akpọkarị anyị na-adịbeghị anya na nnukwu nsogbu nke DNA yiri ka ọ bụ ihe na-ekpe ikpe. Ọ bụ ezie na amaghị ihe ahụ, DNA bụ mgbe niile okwu anwansi. Na Marianne Vaatstra ikpe nyere media ọgbọ egwuregwu nna Bauke Vaatstra Machiavelli ma ọ bụ na price, ma Niccolò Machiavelli (mgbe onye na-agbata n'ọsọ na-aha) o doro anya na "ihe ọ bụla mee" na aghụghọ na aghughọ. Mgbe anyị na-egwuri ugboro ugboro na nnukwu PSYOP (Psychological Operation) azụmahịa na-akwalite echiche na a na-amanye ịrụ DNA database dị ezigbo mkpa na-edozi igbu ikpe, anyị ga-ikekwe na-elerukwu anya na ibuana nke ndị dị otú ahụ a nchekwa data. Kedu ihe ala nwere ike ime ya?
Iji malite, e wepụrụ ihe mgbochi iwu dị mkpa na nicky Verstappen - Jos Brech. A na-eji DNA nke Jos Brech mee ihe n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Nke ahụ bụ ikwu: DNA nke Jos Brech weere ọnọdụ na - efu (ya n'onwe ya kwuru na ọ bụ ya kpatara ya), ma e jiri ya mee ihe na Nicky Verstappen ikpe. Onye ọka iwu Gerald Roethof gosiputara n'ụzọ doro anya na ị bụ onye ọka iwu PsyOp ebe a, n'ihi na ọ bụ n'ihi nke a naanị ya nwere ike iwepụ Jos Brech ozugbo. Ugbu a, ọ bụ ihe iwu na-agaghị ekwe omume ma ya mere na iwu akwadoghị ime otú ahụ. O nwere ike ime nnukwu ihe ebe a, mana o mezighi. Ọnụ ụzọ iwu kwadoro maka nke ahụ (na nghọta nke ndị mmadụ) bụ na nke a nwere ike ịnweta DNA site na nchekwa data maka ikpe ọ bụla. Ya mere, iwu Jos Brech emeelarị ihe dị mkpa maka oge na nchekwa data nchekwa ụwa. Ikpe ziri ezi apụghị iji DNA mee ihe n'okwu ahụ metụtara, kamakwa na ndị ọzọ.
Ya mere, ebe ọ bụla a na-eleba anya na ọkwa abụọ mgbasa ozi ọhụrụ, ịbụ 'DNA DNA nọ na ndị na-agba ume'na'a chọpụtala foto ụmụaka'na Gerald Roethof na ihe ngosi Pauw (lee ebe a) soro na mkparita uka banyere uzo ozo, o kwesiri ilebara anya n'ile anya n'ihe banyere iwu nke DNA site na ihe na-efu n'ime okwu ikpe mmadu. Nke ahụ 'na-adịghị adị' etinyewo m n'etiti, n'ihi na (m na-emegharị ya) ọ dịtụbeghị mgbe e gburu mmadụ ma ọ bụ ikpe ọnwụ igbu mmadụ, ma ọ bụ okwu ọjọọ. Ụdị nkwado ọ bụla nke gosipụtara nke a na-efu. Nke ahụ bụ ikwu: NFI enwebeghị ike igosi igbu ọchụ, igbu mmadụ ma ọ bụ mmegbu. N'ihi ya, ọ dịghị ihe ọ bụla. Enweghị ikpe. Enwere DNA naanị na ndị nọ n'okpuru, ma egwuregwu ahụ na DNA ahụ enwetaghị iwu na-akwadoghị. Gerald Roethof nwere ike inweta Jos Brech n'efu. Ma oburu na enwere obi ebere maka nkwado nke nchekwa data gi, i choghi ka onye omekorisi a na-eme ihe n'echebe ya ka o wepuo ya. Mgbe ahụ, naanị ịchọrọ ime ka akụkọ ahụ dabere na ya site n'igosi na ị bụ ezigbo ọkàiwu.
Ya mere, okwu Jos Brech nwere ihe dị mkpa nke iwu. Ọ bụghị nanị na o mere - dị ka ihe ahụ Vaatstra - na echiche na DNA bụ okwu anwansi na ya mere anyị ga-ebuga ngwa ngwa gaa na nchekwa data nke mba. Nke ka mkpa, Gerald Roethof bụ ọrụ maka ịhụ na ọ dịghị ihe ọ bụla e mere maka iji DNA a anakọtara n'ọnọdụ ọzọ. Na nkenke: otu oge ị nwere DNA gị, steeti ga-enwe ike iji ya mee ihe ọ bụla! Capiche? Eji! Ya mere, ngbachitere Roethof bụ farce!
Ọ bụrụ na steeti ga-enwe profaịlị DNA nke onye ọ bụla na enyemaka ịgba ọgwụ mgbochi iji nyere ndị mmadụ niile CRISPR ntinye, ị nwere ike ichetụ n'echiche ụdị mgbanwe mgbanwe nke a nwere ike mepụta? Ka ị na-amaghị na okwu a? Ọnọdụ ala na-eche echiche 10 nzọụkwụ n'ihu. Gị onwe gị kwa?
Site na iwu onyinye onyinye ahụ, steeti aghọwo onye nwe iwu nke ahụ gị. Ya mere, a na-ekwekwa ka ọ gbanwee ya. Gerald Roethof ewerewo ọnụ ụzọ ka a hapụ gị ka ị jiri DNA ebe a (kama ọ bụ naanị na nchọpụta iwu nke metụtara DNA).
A ghaghị inye roethof n'ala n'ala n'oge ederede. Ana m eche ma ọ bụrụ na ọ gụọla (bAkụkụ ndị kiln banyere nchebe Roethof bụ n'ezie nzaghachi sitere n'otu edemede site na 9 November 2018) iji gbalịa ịnye ọnụ ya dị ntakịrị ịtụkwasị obi. Ọ bụrụ na Roethof emezughị DNA ahụ na-akwadoghị (nke a na-enweta site na onye na-efu efu), ọ na-egosikwa ọzọ na ọ bụ ọkàiwu na-anụ ọkụ n'obi.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: telegraaf.nl, justid.nl, telegraaf.nl
Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ugbu a na-ejikwa ndị ọka iwu rịọ ndị ọkà okwu?
Ihe omume a na-enweghị ike ịkọwapụta: DNA na-agba akaebe, akụkọ gbasara ahụike na nkwupụta autopsy banyere Anne Faber na Michael P. adịghị egosi na ikpe
Tags: ọkàiwu, Brech, familie, Gerald roethof, substantive, Jos, igbu ọchụ, Nicky, ikpe, ikpe, Saskia Belleman, tweet, Twitter. telegraph, eche, Verstappen, tupu eduzi, ikpe, nọdụ ala
12 December 2018 na 11: 47
De Telegraaf na-edokwa ọzọ site n'itinye ihe ederede na isiokwu a:
"E gburu Verstappen ma bụrụkwa na a ga-emegbu ya n'oge ogige okpomọkụ na Brunssummerheide na 1998. Ọnwụ ya nọgidere na-adịghị edozi ruo ogologo oge, ruo mgbe nnukwu nchọpụta DNA metụtara metụtara B. bịara na foto. A chọtara DNA ya n'ebe iri na asaa na uwe nwata ahụ. "
Enweghị ihe àmà nke igbu mmadu ma ọ bụ igbu ọchụ. E nwere ma ọ bụghị n'ezie igbu ọchụ ma ọ bụ okwu ọjọọ. E nwebeghị mgbe a gosipụtara ha abụọ. Ma oburu na egosiputaghi nke a, i nwere ike ime ka o buru oke onu. A sị ka e kwuwe, ọ pụkwara ịbụ ọnwụ nkịtị (njide ejiri obi gị ma ọ bụ na ị na-akpọ ya).
Na eziokwu na Roethof ekwughị nke a, mana naanị na-elekwasị anya na ịghara ịnweta ozi ziri ezi na ohere dị nta na ozi ahụ, na-egosi na ọ bụ ọkàiwu na-anụ ọkụ n'obi.
12 December 2018 na 12: 52
O nwere ike ịbụ na ọ bara uru ịmara bụ na enyo enyo mgbe a ga - ejide gị (mgbe mgbe ụbọchị 3 na 15 awa mgbe ejidechara ya) ga-ebute n'ihu onye ikpe na-ekpe ikpe ikpe ikpe na njide. Ọ na-eme na omume iwu n'oge a na ndị ọkàiwu anaghị eme ike ha niile ma ọ bụrụ na a ga-ajụ enyemaka ego akwadoro. Ọ bụrụ na onye ọkịkpe ahụ nwere onwe ya na oge ahụ, ọ gaghị enweta ego ọ bụla ma ọ bụrụ na Brech enweghi ego dị ka ihe mgbochi. N'ezie, ihe kpatara ọnwụ dị oké mkpa. O doro anya. N'okwu dị otú ahụ, ị ​​ga-ahapụ onye ọkachamara si mba ọzọ / NFI ka ọ bụrụ nke abụọ, karịsịa n'ihi na ikpe a na-enweta ụdị mgbasa ozi ahụ. Nke ahụ nwere nzube. Enwere ihe nile na Netherlands. Ọbụna ndị ọka iwu na-egwu maka ọtụtụ ihe.
12 December 2018 na 12: 55
Ihe kachasị mkpa nke a bụ na ọ dịghị ikpe ọ bụla nakwa na a na-enweta ihe gbasara DNA n'ụzọ na-ezighị ezi na ihe efu (ebe ebubo na-efu na Jos Brech n'onwe ya). Nke ahụ megidere iwu nke ugbu a, ya mere, a pụrụ ịhapụ Josọsọ ozugbo site na nchedo ziri ezi.
Ka ọ dị ugbu a, Roethof aghaghị ịdọrọ uche nke a site n'inwe nchebe dị mma.
12 December 2018 na 13: 29
N'ọnọdụ ọ bụla, o doro anya na Twitter na-agbagha akwụkwọ mpịakọta Martin Vrijland. My tweet to her with the right # nanị adịghị egosi na ya na Twitter usoro iheomume ... dị ka tweets ka Peter R. de Vries.
SaskiaBelleman #Nicky Gerald Roethof na-eme ihe nchebe. Enwere ike ikwuputa ikpe ahụ ozugbo na DNA enwetaghị iwu site na ikpe ọzọ #Josbrech https://t.co/WckUg2o9XB
- Martin Vrijland (@MartinVrijland) December 12 2018
12 December 2018 na 13: 32
Facebook enweghịkwa ihe ọ bụla. Ugbu a, a na-ehichapụkwa foto ndị a, nke mere na ọ bụ ihe a na-adịghị ahụ anya .. ndị mmadụ enweghị mmasị ịpị ihe na-enweghị foto.
M na-enwe ọtụtụ iri puku ndị ọbịa site na Facebook. N'oge a, a na-eme ya ka ọ bụrụ mmadụ ole na ole kwa ụbọchị.
Heray dere, sị:
12 December 2018 na 14: 21
Ihe m chọpụtara dị njọ bụ na Jos B. achọghị ịza ajụjụ banyere otú DNA si abịa na uwe Nicky. Dị ka ọkàiwu ahụ si kwuo, ọ na-abịa mgbe e mesịrị nkwupụta. Ma olee ihe mere na ọ bụghị nanị ikwu na ọ maghị nke ahụ. Nke a bụ azịza kachasị mma, ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị.
M na-echekwa na ọtụtụ ndị mmadụ gụnyere, ikekwe Jos B, ma n'ezie ndị ọzọ. Site n'akwụkwọ bụ omimi ọnwụ nke Nicky Verstappen Simon Vuyk doo anya na Barten Joos, otu n'ime ha mara ụlọikwuu ndị ndú, maara ebe ahu nke Nicky na-aga dị. Ọ na-egosikwa na enwere ike ijikọta onye na-arụ ọrụ na Ministry of Justice. Eleghị anya ọnọdụ ndị ahụ ga-apụrịrị kpamkpam ma ọ bụ banye n'ime mkpuchi.
12 December 2018 na 15: 49
All na-akpali ntoonu dị ka ị na-aghọta na ọ bụ nanị a psyop ewebata DNA database na unmarked ịgba ọchịchị mgba okpuru iwu na-ekwu na ị pụrụ nanị iji DNA na nchoputa nke ọ na-anakọtara.
Na nkenke, ozugbo DNA na nchekwa data, enwere ike iji ya ebe niile. Nke a na-enye ohere maka RIVM, ọmụmaatụ. The DNA nchekwa data bụ mgbe a ezi ihe ọmụma isi n'ihi na Big Data analysis (eg butere n'aka nsogbu "insurgent Oppositional Àgwà '), maka mmebe ụmụ ọhụrụ, vpor ahaziri ọgwụ mgbochi na ị na-apụghị aha ya.
12 December 2018 na 15: 56
Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa ma dị egwu nke na njikọ ahụ na-esi ebe a pụta. Roethof kwesịrị ịrịọ ka a tọhapụ ya ngwa ngwa n'ihi na Ụlọ Ọrụ Mgbasa Ozi na-enweta DNA nke Jos Brech n'okwu ikpe nke dị iche na ikpe Nicky Verstappen. E kwesịghị iji DNA ahụ mee ihe.
Nke a bụ nchịkọta nke iwu ndị dị ugbu a ma meghee ụzọ maka iwepu oke a n'ọdịnihu.
12 December 2018 na 16: 20
Nsogbu bụ na anyị anaghị ebi n'ụkpụrụ iwu. Usoro iwu ahụ rụrụ arụ. Anyị enweghị ike ịtụ anya ihe ọ bụla sitere na arụ. Ndị ohu ahụ na-ahụ ncha ahụ nke ndị na-enyo enyo na-emekarị jupụtara na anwụrụ ọkụ na enyo maka eziokwu ahụ. Onye ọ bụla nọ na Netherlands na-ekere òkè. Enweghị ihe dịka aka ekpe na aka nri, enweghị mmegide ọ bụla. Otú ọ dị, enwere achicha (ike na ego) nke a ga-aha maka ndị òtù nke onwe ha, okuku octopus.
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM dere, sị:
12 December 2018 na 15: 03
Banyere DNA bank 10% njikere!
" Strasbourg Christmas egwu ụjọ na-agba ọsọ na-eyi ọha egwu yiri nnọọ mma timed (welcome Eurogendfor)
Akwụkwọ ozi e degaara Peter R. de Vries n'akwụkwọ ikpe Nicky Verstappen »
Nleta nile: 16.024.377
guppy op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1
SalmonInClick op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1
Riffian op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1
Tụlee op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1